01 / 06 / 2021 27 / 05 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 211 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, ၇၆၃၈၆ Hogwartပထမပျံသင်ခန်းစာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, LEGO Group, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, LEGO.com, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group
ဤတွင်အသစ်သောအပေါငျးတို့သဖြစ်ကြသည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီကနေဝယ်ဖို့ရရှိနိုင်အစုံ။
ဆောင်ပုဒ်၏အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင်သင်နှင့်အတူအိမ်ပြန်နိုင်မည့်အသစ်တည်ဆောက်မှုရှစ်ခုရှိသည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ်art ပထမနှစ်တွင်တွေ့ဆုံ ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwartပထမပျံသင်ခန်းစာနှင့်အတူဒုတိယနှစ် Adventures ရန် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှင့် ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှုနှင့်အတူဟယ်ရီရဲ့တတိယနှစ်တွင်မှတဆင့်လမ်းတလျှောက်လုံးလာမယ့် 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်.
ဟယ်ရီနှင့်ဟာမီနီယန်ဗားရှင်းများပါ ၀ င်သည် 73693 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger နှင့်အုတ် - built မီးတောက်ငှက်တစ်အုပ် 73694 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်.
အစုံအားလုံးမှာအေးအေးဆေးဆေးကိုးကားစရာများနှင့်မှော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ဆောက်ရန်အသစ်များအတွက်လွယ်ကူသောလွဲချော်မှုကိုးကားချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်သည်။ ဒီမှာ။ Plus အားကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ် ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အသေးစိတ်အတွက်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအစုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသို့လင့်ခ်များကိုရှာပါ။